Fudud: Ku daabac Podcasts-kaaga habka fudud | Martech Zone
Khamiis, Maarso 30, 2017 Jimce, Maarso 31, 2017 Douglas Karr
Sida podcastcast-yada badan, waxaan ku martigelinay barnaamijkeenna 'Libsyn'. Adeeggu wuxuu leeyahay xulashooyin fara badan iyo isku-dhafid aad u culeys badan laakiin aad loo qaabeyn karo. Waxaan nahay farsamo heer sare ah, in kastoo, sidaa darteed waxaan ku kalsoonahay ganacsiyada badankood inay ku adkaan doonto inay buuxiyaan dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah si fudud loogu daabaco Podcast fudud.
Badanaa waqtiyada, barnaamijyada dhaxalka leh waxay leeyihiin korsasho qoto dheer oo sidaas darteed waa muhiim muhiim u ah kor u qaadista khibradooda isticmaale waa go'aan aad khatar u ah ama sii soconaya. Taasi waa halka tartanku ka socdo! Simplecast waa madbacadda daabacaadda fudud ee laga yaabo inay dhaafto Libsyn iyo aaladaha kale.
Fudud waxay leedahay khibrad fudud oo xariif ah. Waxay bixisaa qaab ama daabacaadda podcast cusub ama soo dejinta qaybahaaga hadda si dadaal ah.
Buuxinta faahfaahintaada podcast-ka waa mid fudud:
Wareejinta Podcast aan Xanuunka lahayn - Deg deg ah oo fudud 1-talaabo wareejinta iyo soo dejinta boodhadhkaaga jira ee loo yaqaan 'Simplecast'.
Xadka iyo Kaydinta aan xadidnayn - Ha ka welwelin baaxadda ballaadhinta iyo kaydinta, dhammaantood waxay ku jiraan xirmadaada 'Simplecast'.
Cajaladda Audio-ka ee la qaadan karo Kudar qalab maqal ah oo fudud oo loogu talagalay galkaaga si toos ah boggagaaga, ama meelkasta.
Qiyaasta Dhegeystayaasha - Si dhakhso leh u arag waxa caanka ah, yaa dhageysanaya, iyo sida ay wax u dhageysanayaan.
Maareeyayaal badan - Ku martiqaad kuwa kale inay wada shaqeeyaan oo ay gacan ka geystaan ​​maaraynta faylkaaga. Waa maxay sababta keligeed loo sameeyo?
Marti geli Websaydhada Macaamiisha - Websaydh fudud, oo martigeliyey boggagaaga adoo adeegsanaya taageerada boggaaga. Xulo shaxd ama naqshad u gaar ah.
Tags: martigalinta Podcastdaabacaadda Podcastdaabac Podcastdaabacaan boodhadhfudud